China Semi Endlebeni Uyilo USB C Bluetooth True Wireless Earbuds T15 Ukwenziwa kunye Factory | Yong Fang
Okubonisa kwindlebe kuyilo lwe-USB C yeBluetooth eyiNtloko yeeNdlebe ze-T15
Isisombululo seBluetooth: JL6976 V5.1
Ubungakanani beLi-ibhetri: 3.7V, 35 mAh
igama lemveliso: T15
Somlomo ubukhulu: ￠ 10mm
Ukutshaja ixesha lendlebe zombini: ixesha le-4.5
Ch I-ATS Chipset ezinzileyo, inguqulelo5.0Oku kuyinyani kweendlebe ezingenazingcingo kusekwe kwisiphelo se-ATS chipset, ATS 3015, eboniswe ngokusebenza okuzinzileyo kweBluetooth kunye ne-latency ephantsi;
Umqhubi we-10mm, uSemi kuYilo lwendlebe】Ukuhlala ixesha elide kugqityiwe kwaye ukomelela okwahlukileyo, ezi ndlebe zeBluetooth ziyilelwe kwisitayile sendlebe kwaye ngaphakathi ezindlini ngabaqhubi abanamandla be-10mm.
I-Ultimate Bass High Clarity 6mm yeNeodymium Driver】umgangatho ophezulu we-stereo 6mm neodymium ngaphakathi kwendlu ye-acoustic eguqulweyo yobugcisa evelisa isandi esicacileyo se-bass crystal;
Uphawu lokugqibela lokuGqibela kweMowudi yeNdlela yeMidlalo】Ixhasa imowudi yokudlala esezantsi kakhulu, xa sidlala imidlalo, sinokubona, sive, sive kwaye sisabele kwinto eyenzekayo kumdlalo ngokukuko. Yiyo loo nto okwangoku, uninzi lwabantu lusebenzisa ii-headphone zemidlalo ezinentambo, endaweni yezixhobo zokudlala ezingenazingcingo, ngakumbi abadlali bezemidlalo abaqeqeshiweyo. Ngophuculo kwi-latency, ngoku, ngakumbi nangakumbi ii-headsets zemidlalo ezingenazingcingo ziya kuba lukhetho oluthandayo kwimidlalo;
F Ukuqina okukhethekileyo kunye noYilo lobuNjineli be-Ergonomic】Uninzi lwee-ears ze-tws, abantu banexhala malunga nokuqina komzimba kunye nokuwa ezindlebeni. Iqela lethu elinamava le-R & D lenze uhlalutyo oluneenkcukacha kunye nolwazelelelo kunye namaxesha amaninzi ovavanyo olusebenzayo ukuphucula nokuqinisekisa le micimbi ixhaphakileyo kodwa yintloko. Kwaye, ukomelela okwahlukileyo, iingcebiso ze-silicone zeendlebe zenziwe bucala kule modeli;
Ulawulo lweTouch kunye neMigangatho emi-5 ye-IPXNjengefowuni yokwenene engenazingcingo inokusetyenziswa phantsi kweemeko ezahlukeneyo kunye nokusingqongileyo, le modeli ingadlula kuvavanyo lokumelana namanzi lwe-IPX 5. Ke, xa sisenza umthambo wezemidlalo, sinokunxiba kwi-tws earphone yokuphulaphula umculo, intetho yefowuni, okanye ukumamela iinkqubo ezithile ezingenazingcingo;
Izixhobo eziFumanekayo zokuSebenzisa ngokuLula】Ngokwesiqhelo, izincedisi ziya kubandakanya la malungu, isikhokelo esikhawulezayo, ubungakanani obu-3 beengcebiso ze-silicone zendlebe ezenziwe ngokwezifiso, kunye nentambo yokutshaja yamandla;
Egqithileyo Ixabiso elikhuphisanayo Umbala uMxube we-Bluetooth Music yoLungiso lweBT-8026
Okulandelayo: Umzi mveliso wokuqala weTs Earphone kunye nentloko yoLungiso lweeNtloko zezemidlalo ukuSebenza ngokuQiniseka kweeNdlebe ezingenazingcingo ezingenazingcingo T18
Umzi mveliso wokuqala weTs Earphone kunye nephonephone ...